Ukwehliswa kabusha kuqediwe e-Accabonac Harbour - i-Ellicott Dredges
Ukwehliswa kabusha kuqediwe e-Accabonac Harbour
An I-Ellicott® 670 Dragon isanda kusetshenziselwa ukuqedela iphrojekthi yokwemba phansi i-Accabonac Harbour e-East Hampton, eNew York.
I-dredge ithengwe yiSuffolk County ngenhloso yokungena ngaphakathi, futhi yasetshenziselwa ukusula amathe olwandle olwalunciphise itheku eliseduze naseLouise Point. Ama-Trustee ase-East Hampton Town athi ukwenziwa kwezinto ngokweqile kwenza kube nzima ukuthi izikebhe zikwazi ukungena kulo mkhumbi, nokuthi ama-baymen endawo abilethile.
I-Ellicott® 670 Series yi-a dredge ephathekayo yokudonsa ezingahanjiswa kalula futhi zihlanganiswe kusayithi ngomzamo omncane. Le dredge eguquguqukayo ilungele noma yimuphi umnikazi we-dredge noma i-opharetha efuna ukuthenga umkhumbi okulula ukuwusebenzisa. I-670 ijwayele ukusetshenziselwa amaphrojekthi asezingeni eliphakathi nendawo ezindaweni ezinjengezincane amachweba, imifula, namaphrojekthi wokwenziwa kwamanzi angaphakathi nezwe.
Ama-Trustee adonse le ndawo kule minyaka edlule, kepha umsebenzi wanikeza isixazululo sesikhashana kuphela.
"(Ukumbiwa) bekuyiBand-Aid nje enenkinga yangempela," kusho iTrasti uFrancis Bock, othe ukudilizwa kuyadingeka. I-Ellicott 670 Dragon dredge ivule indawo yokungena ngesikebhe ukuze ibhizinisi liqhubeke ngaphandle kokuphazamiseka.
UBock uthe ezinye izakhamuzi bezingeneme ngokuthi indawo yasolwandle isusiwe, kodwa ubakhumbuze ukuthi inhlwathi yesihlabathi bekungeyona indawo yokubhukuda. Ubuye wengeza ukuthi ngentwasahlobo nasehlobo elizayo, kuzobe sekube nolwandle olukhulu ngisho nangaphezulu ukuze izakhamuzi zikujabulele.
Source: Inkanyezi yaseMpumalanga Hampton